Cajiibka - 8 Faa'iidooyinka Baaxadda leh ee Google Gawaarida
Sawir gacmeedka Google waa qalab lagama maarmaan u ah xogta jarista Google Xiriirin iyo in lagu rakibo kiniiniyada, casriga ama qalabka kombiyuutarka si fudud. Cilmi-baadhayaashu had iyo jeer waxay ubaahan yihiin macluumaad si ay u taageeraan tusaalooyinkooda oo ay caddeeyaan fikirkooda. Sidoo kale, ganacsatadu waxay u baahan yihiin xogta la soo saaro si ay u koraan ganacsigooda ayna bartilmaameed badan oo macaamiisha adduunka ah. Qaar ka mid ah faa'iidooyinka muhiimka ah ee warshadaha Google ayaa lagu sharxay hoos.
1 - how to make local area network at home. Xogta kala sooc:
Xogta waxaa badanaa lagu soo bandhigaa qaab aan nidaamsaneyn oo qashin ah. Boodhadhka Google wuxuu fududeeyaa inuu ururiyo xogta isla markaana u abaabulo sida shuruudahaaga. Waxay kaa caawinaysaa inaad ka soo ururiso macluumaadka lambarrada xidhiidhka, cinwaannada emailka, magacyada, iyo boggaga internetka. Tani waa qalab ka fiirsasho haboon oo kala saari kara xogta aan toosnayn ee macluumaadka faa'iido leh oo ku siinaya natiijooyinka ugu fiican uguna fiican.
2. Diiwangalinta liiska mihnadaha:
Faa'iidada labaad ee faa'iidada Google ee xoqista waa iyada oo xajinaysa liiska xirfadlayaasha leh sahlan, mana aha inaad ka walwasho tayada xogta. Qalabkani wuxuu si gaar ah ugu wanaagsan yahay goobaha ganacsiga, wuxuu helaa liiska xirfadleyda, wuxuu abaabulaa xogta, wuxuuna kugula talin doonaa natiijooyinka aad rabto in ay noqoto.
3. Xawaaraha iyo saxnaanta:
Adeeggani, waxaa lagu xaqiijin karaa xog sax ah. Ballan-qaadka Google wuxuu ballan-qaaday natiijooyin degdeg ah isla markaana wuxuu qabanayaa hawlo waqti isku mid ah. Marka la barbardhigo waraaqaha kale ee caadiga ah, qalabkani wuxuu ka soo saari karaa macluumaadka isku-xirayaasha Google badan oo ah xawaare aad u wanaagsan oo sax ah ayaa la ilaaliyaa inta lagu gudajiro geedi socodka.
4. Ururinta macluumaadka faa'iido leh iyo qiimo leh:
Haddii aad raadinayso inaad ururiso macluumaadka qiimaha leh ee faa'iido leh, waxaad isticmaali kartaa boodhadhka Google si aad u hesho shaqadaada. Macaamiilayaal iyo ururo kala duwan ayaa hirgeliya adeeggan si loo helo xogta shaxda iyo joqraafiga labadaba. Waxay leedahay sifooyin aan caadi ahayn waxayna xaqiijineysaa bixinta qaladaadka aan khalad lahayn.
5. Faa'iidooyinka Hawlaha:
Waxaan ognahay in warshadaha kala duwan ay bixiyaan adeegyo iyo faa'iidooyin kooban, laakiin Google scraper waa adeeg aad u sareeya oo cajiib ah. Waxaad xoqin kartaa ilaa toban kun oo xiriir oo leh qalabkani, keydso xogta CSV iyo qaababka JSON, ama si toos ah ugu soo qaad khadkaaga adag ee loogu talagalay isticmaalka offline. Waxay ku haboon tahay barnaamijyadana waxaa laga heli karaa qalab kombuyuutar ama qalab mobile ah.
6. Ujeedooyinka shabakadaha internetka iyo e-ganacsiga:
Gawaarida Google, waxaad bartilmaameed u noqon kartaa bogagga internetka iyo e-ganacsiga. Tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad ka tirtirto macluumaadka Amazon iyo eBay, si fudud ayaad u isticmaali kartaa qalabkan si aad u hesho shaqadaada. Shabakadaha leh meelo badan oo kala duwan, xaaladaha, codsiyada jibbaarada, iyo cinwaanada emailka ayaa laga soo saari karaa sanadaha gudahood. Waxaa intaa dheer, waxaad ururin kartaa macluumaad ku saabsan alaabooyin kala duwan, sharraxaadkooda, iyo sawirada.
7. Shirkadaha warbaahinta ayaa wanaagsan:
Shirkadaha warbaahinta ayaa ka faa'iideysan kara qalabkani waxana ay ururin karaan xogta laga helo goobaha warbaahinta bulshada oo ay ku ogaadaan mawduucyada tareenka maalin kasta. Adeeggaasi wuxuu ku salaysan yahay macluumaad dhab ah, wuxuu badbaadiyaa waqtigaaga, wuxuuna hagaajiyaa waxtarkaaga shaqo.
8. U qalmida shirkadaha safarka:
Shirkadaha socdaalka ee raadinaya inay ka tirtiraan xogta laga helo mareegaha internetka waxay isticmaali karaan waraaqdan si ay u helaan shaqadooda. Waxaad ka heli kartaa macluumaadka ka yimaada magaalooyinka iyo Trivago waxayna bilaabi kartaa boggaaga safarka dhawr maalmood.